Taallo Dabagaale oo dhererkeedu yahay 12 mitir oo laga dhisay dalka Kazakhsatan - Somali
Taallo Dabagaale oo dhererkeedu yahay 12 mitir oo laga dhisay dalka Kazakhsatan
Falanqayn cayaarta Ingriiska iyo Croatia
Nambia: Qaxootiga waa inay dib ugu soo laabtaan dalka
Mid ka mid ah dhakhaatiirtii ugu magac dheerayd Soomaaliya oo geeriyooday
Manchester City oo lacagtii ugu badnayd soo siisatay Mahrez
Posted at 17:39 11 Luulyo 201817:39 11 Luulyo 2018
Posted at 16:17 11 Luulyo 201816:17 11 Luulyo 2018
Taalla Dabagaale oo dheereerkeedu yahay 12 miitar oo laga dhisay dalka Kazakhsatan
PAUL BARTLETTCopyright: PAUL BARTLETT
Dadweyanaha ku dhaqan dalka Kazakhsatan ayaa amakaag iyo yaab kusoo waa-bariistay markii ay magaalada caasimadda ah ee Almaty ay ku arkeen taalla Dabagaale oo dheereerkeedu gaaraya 12 miitar.
Taallada Dabagaale waxaa laga sameeyay alwaax, wuxuuna qayb ka yahay mashruucyada dowladda hoose ay ku horumarinayso bilicda caasimadda.
Dadka qaar ayaa isweyddinaya sida loo sameeyay Dabagaale intaasi la’eg oomuuqaalkiisa uu la wareegay magaalada.
Taallada Dabagaale waxay ka qayb tahay bilicda magaaladaImage caption: Taallada Dabagaale waxay ka qayb tahay bilicda magaalada
Dowladda hoose ayaa dhisitaanka taallada ku bixisay 15 milyan lacagta dalkaasi. Dadweynaha qaar waxay leeyihiin waxaa lagu takrifalay lacagta dadweynaha intii bulshada wax loogu tari lahaa.
Taallada Dabagaale waxaa sameeyay Injineero u kala dhashay dalalka KoonfurAfrika iyo Ingiriiska.
Mid kamid ah Injineerada ayaa sheegay in Dabagaalaha uu astaan u yahay kobac magaalada caasimadda ee Almaty.
Posted at 15:34 11 Luulyo 201815:34 11 Luulyo 2018
Posted at 14:13 11 Luulyo 201814:13 11 Luulyo 2018
Ardayad loo diidanaa inay soo xirato xijaabka munaasabadda qalin jabiteeda oo maanta loo ogolaaday
Ardayada baratay cilmiga sharciga ayaa si rasmi ah u qalin jibisay maanta kaddib markii horraan loo diidana inay soo xirato xijaabka maalinka ay qalin jebinayso.
Maamulka jaamacadda ayaa sheegay in Amasa Firdaus loo ogolaaday inay kasoo qayb gasho munaasabadda qalin jebintaJaamacadda iyadoo xiran xijaabkeeda.
Ururka ay midoobeen ardeyda muslimiinta ee Jaamacadaha dalka Nigeria ayaa soo dhaweeyay go’aanka jaamacadda Ilorin University ay u ogolaatay Amasa Firdaus inay soo xirato xijaabka xilli ay joogtay munaasabadda qalin jebinta.
Waxay intaasi ku dareen in Firdaus laga hor istaagay munaasabadda horraan xijaab dartiis ay hayd mid ka dhan ah xuquuqdeeda.
Firadaus ayaa sheegtay in xuquuqdeeda lagu xaadgudbay.
Posted at 13:10 11 Luulyo 201813:10 11 Luulyo 2018
Harry Kane oo u dheela xulka IngiriiskaImage caption: Harry Kane oo u dheela xulka Ingiriiska
Xulalka Ingiriiska iyo Croatia ayaa caawa wada dheelaya saacadda Afrikada bari marka ay tahay 9:00pm fiidnimo.
Xulka caawa badiyo wuxuu u gudbi doonaa cayaarta kama dhambyasta ee cayaaraha Koobka Adduunka.
Xulka Faransiiska aya hadda u gudbay cayaarta kama dambaysta.
Luka Modric oo u cayaara CroatiaImage caption: Luka Modric oo u cayaara Croatia
Xulka Croatia ayaa markii labaad usoo gudbay cayaarta nus dhammaadka ee Koobka Adduunka, markii ugu dambyasana waxay ahayd sannadkii 1998-dii.
Waa markii saddexaad uu xulka England usoo gudbay cayaaraha nus dhammaadka,markii ugu dambaysana waxay ahayd sannadkii 1990-kii.
Posted at 12:26 11 Luulyo 201812:26 11 Luulyo 2018
Waxaa dhamaaday xilligii loo qabtay qaxootiga kasoo jeeda Namibia ee ku sugan dalka Botswana si ay ugu soo laabtaan dalkooda.
Qaxootiga Nambia ee u qaxay 20 sanno ka hor dalka Botswana ayaa gaaraya tiradooda 1000.
Dowladda Nambia ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii dadka qaxooytiga ay dib ugu soo laaban lahaayeen dalka,arrintan ayaa ka dambaysay kaddib la gaarayb heshiis Qaramada Midoobay ay garwadeen ka tahay oo lagu soo celinaya Qaxtootiga reer Nambia ee u qaxay sagaashamaadkii dalka Botswana.
Ku dhawaad 3,000 qof ayaa u qaxay dalka Bostwana sagaashamaadkii xilligii ay socdeen kacdoon gooni u goosad lagu raadinyay.
Posted at 12:02 11 Luulyo 201812:02 11 Luulyo 2018
Halkan ka daawo magaalada siddeedaad ee ugu wasakh badan adduunka oo dhan.
Posted at 11:17 11 Luulyo 201811:17 11 Luulyo 2018
'Marnaba lama iloobin'
Dadkii ku dhintay bamkii lagu weeraray taageerayaashii Uganda ku daawanayay Koobka Adduunka.
Iyadoo ciyaarta kama dambaysta ah ee Koobka Aduunka ay foodda inagu soo hayso waxay arrintaasi xasuusin u tahay masiibadii dadka reer Uganda ku habsatay siddeed sano ka hor.
Markii ay taariikhdu ahayd 11 bisha Luulyo ee 2010 qarax bam ayaa lagu dilay in kabadan 70 ruux oo daawanayay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee Koobka Adduunka ee sannadkaas dhex martay Spain iyo The Netherlands, dadkaasi ayaa ciyaarta ka daawanayay makhaayad ku taalla magaalada caasimadda ah ee Kampala.
Wargayska New Vition ayaa sidan ku xusay dhacdadaas.
Ururka Al Shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda weerarkaas bamka loo adeegsaday.
Sannadkii 2016-kiina siddeed ruux ayaa lagu helay in ay ku luglahaayeen weerarkaas.
Posted at 10:28 11 Luulyo 201810:28 11 Luulyo 2018
Qaxootiga Namibi waa “qasab in ay laabtaan”
Waxaa maanta ku eg wakhtigi kama dambaysta ahaa ee loo qabtay 1,000 ruux ee qaxootiga reer Namibia ah, si ay si mutadawacnimo ah uga laabtaan dalka ay dariska yihiin ee Botswana oo ay 20 sano ka hor u fixadeen.
Masuuliyiinta Botswana ayaa sheegtay in ay doonayaan in ay ku dhaqaaqaan dib u celinta dadkaas oo ka soo jeeda deegaanka Caprivi Strip ee dalka Namibia, iyaga oo raacaya heshiis wakhti hore la gaaray oo ay dusha kala socotay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga.
Dad lagu qiyaasay 3,000 oo ka soo jeeda deegaanka Caprivi Strip ee dalka Botswana ayaa qaxay 1990-yadii markaas oo uu socday kacdoon gooni u goosadka.
Intaas wixii ka dambeeyayna dadkaas intooda badan dib ayay u laabteen.
Hay’adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa Botswana ugu baaqday in aysan dadkaas dib ugu celinin dalkooda iyaga oo ku qasbaya, haddii uu jiro halis ay la kulmi karaan.
Posted at 9:55 11 Luulyo 20189:55 11 Luulyo 2018
Mudaaharaad canshuurta baraha bulshada lagaga cabanayo oo Kampala ka dhacay
Booliiska dalka Uganda ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo xabbado ay hawada u rideen si ay ukala eryaan mudaaharaad aan waynayn oo ay dadku ku diidan yihiin canshuurta lagu soo rogay baraha ay bulshadu ku xiriiraan, sida ay ku soo warramayso weriyaha BBC-da ee magaalada Kampala Catherine Byaruhanga.
Waxay sheegtay in booliisku ay isku dayeen in ay xiraan Robert Kyagulany oo ah xildhibaan iyo fanaan hogaaminayay mudaaharaadka, balse wuxuu maareeyay in uu ka baxsado.
Wariye dhanka kaameerada ah ayaa sawirkan soo dhigay Twitter-kiisa.
Posted at 8:36 11 Luulyo 20188:36 11 Luulyo 2018
Saaka waxaa Nairobi ku geeriyooday Allaha u naxariistee Dr Axmed Maxamed Xassan oo ku magac dheeraa Foodcadde oo ka mid ahaa dhakhaatiirtii Soomaalia kuwii ugu magaca weynaa.
Axmed wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho sannadkii 1938-dii.
Inta la ogyahay mar wuxuu ahaa dhakhtarka kali ah ee wadnaha ee Soomaaliya.
Muddo dheerna wuxuu ahaa dhakhtarka khaas ah ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre.
Lixdameeyadii wuxuu noqday guddoomiyihii bisha cas ee Soomaaliya oo uu ku muteysatay abaalmarinno badan sida mid caalami ah oo oo ay siisay Hay'adda Laanqayrta Cas ee Caalamiga ah oo magaceeda loo soo gaabiyo ICRC.
Boqorada Britain Queen Elizabeth ayaa guddoonsisay abaalmarintaas billadda ahayd oo bisha cas ee Soomaaliya ay ku muteysatay shaqadii bani-aadminimo.
Posted at 7:08 11 Luulyo 20187:08 11 Luulyo 2018
Soo badbaadinta carruurtii bohosha ku jirtay oo loo riyaaqay
Farxad iyo raynrayn ayaa lagu soo dhaweeyay soo badbaadinta 12ka wiil iyo tababarahooda kubbadda oo ku xannibnaa bohosha ay biyuhu ugu galeen ee waqooyiga Thailand, ka dib markii dadka biyaha quusa ay soo dhamaystireen hawshii ay dibadda ugu soo saarayeen.
Shantii u dambaysay ayaa la soo saaray Talaadadii ka dib markii ay halkaas ku xayirnaayeen 17 maalmood.
Hawlgalkii aan sahlanayn ee lagu soo samato bixinayay carruurta iyo tababarahooda ayaa indha caalamka soo jiitay saddexdii maalmood ee la soo dhaafay.
Dabaaldeg ayaa ka billawday dalkaas ku yaala Koonfurta Bari ee Aasiya.
Warbixintan oo intaas ka faahfaahsan kaga bogo lifaaqan
Posted at 6:55 11 Luulyo 20186:55 11 Luulyo 2018
Kooxda Manchester City ayaa jabisay rikoorkii wax soo iibsiga ka dib markii ay Riyad Mahrez oo garabka ka dheela ay kula soo wareegtay 60 milyan oo gini.
Riyad Mahrez ayaa laga soo gatay kooxda Leicester City
27 jirkan ayaa sixiixay qandaraas shan sano ah, isaga oo noqday ciyaartoygii u horreeyay ee kooxdu soo iibsato tan iyo markii ay Horyaalka Ingiriiska ku guulaysatay xilli ciyaareedkii u dambeeyay.
Mahrez oo reer Algeria ah ayaa sheegay in ay “aad ugu wanaagsan tahay” isaga qaab ciyaareedka Man City uuna doonayay in uu kamid noqdo kooxdan “dib u qeexaysa ciyaaraha Ingiriiska”.
Posted at 6:43 11 Luulyo 20186:43 11 Luulyo 2018
Dawladda Maraykanka ka cudurdaaratay amarka maxkamadda
Dawladda Maraykanka ayaa sheegtay in aysan ka soo bixi karin wakhtigii ay maxkamaddu u qabatay in ay ku midayso qoysaska soo galootiga ah iyo carruurtooda shanta sano ka hooseeya ee lakala geeyay markii ay Maraykanka soo galayeen.
In kabadan boqol carruur ah oo ay dadka soo galootiga ah dhaleen ayaa la geeyay meel aan ahayn meesha waalidkood lagu xiray, iyadoo la adeegsanayo siyaasadda kala gaynta ee uu hadda ka tanaasulay madaxweyne Trump.
Masuuliyiintu waxay sheegeen in 34r ilmood loo gayn doono waalidkood, balse carruurta kale aysan waalidkood la midoobi doonin arrimo farsamo awgood.
Posted at 6:22 11 Luulyo 20186:22 11 Luulyo 2018
Kulanti wanaagsan akhyaarta halkan naga daalacataay, kuna soo dhawaada tabintan tooska ah een ku samaynayno wararka Soomaalida iyo kuwa caalamka.
Waa waa maalin Arboco ah oo ay taariikhdu tahay 11 bisha Luulyo 2018ka.